Alarm Clock for Heavy Sleepers — Loud Smart Math အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（12.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Alarm Clock for Heavy Sleepers — Loud Smart Math
Amdroid Smart alalt clock သည်အလွန်အမင်းအိပ်စက်ခြင်း, Timer & Stopwatch နှင့်သင်္ချာပြ problems နာများရှိသည့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်သင်္ချာပြ problems နာများပါသောအိပ်ပျော်သူများအတွက်အခမဲ့နှိုးစက်နာရီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်အိပ်ပျော်နေသောအိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်းရှိနေသော်လည်းနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, အိပ်ပျော်ခြင်း, ပဟေ les ိများနှင့်အတူဤကျယ်သောနှိုးစက်နာရီကိုအိပ်ပျော်နေသောများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်!
Countdown Alarms - Power Nap မှနိုးထရန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှိုးဆော်သံများကိုနှိုးခြင်း နက်ရှိုင်းစွာအိပ်ပျော်နေသောအိပ်ပျော်သူများသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းနိုးလာစေနိုင်သည်။
settings တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင် Settings တစ်ခုချင်းစီရှိသည်။ မိုးလေဝသသတင်းအချက်အလက်များ (သင်္ချာဆိုင်ရာပြ problems နာများ, captcha, Wi-Fi, NFC, NFC, NFC, NFC, Barcode / QR Code, Light) သည်အိပ်ပျော်ခြင်းအတွက်ကျယ်လောင်သော smart alalt clock ကို အသုံးပြု. Music & Timer ဖြင့်အသုံးပြုပါ Weight Clock
) t ကိုပိတ်ထား? Amdroid, Guard နိုးလာပြီးသင့်နိုင်ငံအတွက်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များကိုသိတယ်။ နှိုးစက်ကဒီရက်တွေမှာမသွားဘူး (optional) ။ ဒီအိပ်စက်ခြင်းခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့နာရီမှနှိုးဆော်သံကိုပယ်ချပါ။ Next Adjust ကိုညှိပါသို့မဟုတ်အသံအမိန့်များကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ကြိမ်နှိုးစက်အသစ်များကိုထည့်ပါ။
အချိန်မီနှိုးရန်စိန်ခေါ်မှုများ (ပဟေ les ိများ) နှင့်သင်္ချာလုပ်ငန်းများကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပါ။ သင်နိုးထ။ မကြည့်ဘဲနေရန်နှင့်နေရန်သေချာစေရန် Post Alarm အတည်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အိပ်ပျော်နေသောအိပ်ပျော်သူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအသံချဲ့စက်များ, သင်္ချာပြ problems နာများကိုသာဖြေရှင်းပါ။
•နိုးနေချိန်မှာနိုးလာတာ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြိုတင်နှိုးဆော်သံကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဤနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှိုးစက်အတွက် volume နှင့် Disable Vibrating ကိုလျှော့ချပါ, ဒါကြောင့်သင်ဟာညင်သာစွာနိုးထလာရင်ပိုကောင်းတဲ့နံနက်ခင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်အိပ်ပျော်နေရင်ညင်ညင်သာသာနိုးလာလိမ့်မယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ Timer နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နှိုးစက်နာသောနာရီ၏စွမ်းအား။
amdroid, နိုးထနှိုးဆော်ခြင်း, လတ်ဆတ်သောနိုးထရန်အိပ်ပျော်သွားသောအခါအိပ်ပျော်သွားသောအခါအိပ်ပျော်ရန်အိပ်ပျော်ရန်အချိန်တန်ပြီဆိုလျှင်အိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့် ပတ်သက်. သင့်အားအသိပေးပါလိမ့်မည်။ အိပ်စက်ခြင်းခြေရာခံခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာစက်ဝန်းတွက်ချက်မှုကိုစတင်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများကိုစတင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ညင်ညင်သာသာနိုးထရန်စတင်နိုင်သည်။ Stats များနှင့်အတူဤ Custom Alarm နာရီကိုသင်အိပ်ပျော်နေသောအချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်ခြေရာခံရန် Sleep Tracking App ကိုသုံးနိုင်သည်။
သတိပြုမိ, ဒါကြောင့်သင်၏နှိုးစက်အချို့ဒေသများတွင်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးခရီးစဉ်အတွက်ထွက်ခွာခြင်း, သင်၏နံနက်ခင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Amdroid သည်သင်၏ပုံမှန်အချက်ပေးပရိုဖိုင်းကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်။ apdroid သည် app ကိုပိတ်ထားသည့်တိုင်နေရာများကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါကပင်တည်နေရာဒေတာများကိုစုဆောင်းသည်။
• doze သို့မဟုတ်နေ့လည်ခင်း Power Nap
DRSWSY? အကယ်. သင်အိပ်ချင်နေပါကသင်၏ power napy အတွက် timer တစ်ခုအနေဖြင့် Countdown Alarm function ကိုသုံးပါ။ Stopwatch သို့မဟုတ် timer ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ပါက, သဘာဝအလျင်အမြန်နိုးထခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှိုးစက်နာရီနှင့်အိပ်စက်ခြင်းခြေရာခံ app အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးကျယ်သောစမတ်နှိုးစက် clock app ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မှတ်စုများ။ > အက်ပလီကေးရှင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားရန် Premium အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။
TOP 5: Best Loud Alarm Clock for Heavy Sleeper 2021 | Perfect for Kids and Adults
Best Alarm Clocks for Heavy Sleepers 2021
Mr King Reviews
Alarm Clock for Heavy Sleepers — Loud Smart Math 5.1.1
Alarm Clock for Heavy Sleepers — Loud Smart Math 5.0.1
Alarm Clock for Heavy Sleepers — Loud Smart Math 5.0.0